अण्डा खाएपछि भुलेर पनि नखानुहोस् यी चिज, नत्र पछुताउनु पर्नेछ – Sanchar Patrika
काठमाडौँ हामिले धेरै खानेकुराहरु एकैसाथ मिसाएर खाने गर्छौ । किनकी कुनै चिजहरु स्कसाथ मिसाएर खाँदा स्वादिष्ट हुन्छ । तर यस्ता चिज पनि हुन्छ जुन एक आपसमा मिसाएर खानुहुदैन । मिसाएर खाएमा स्वास्थ्यमा ग’म्भिर स’मस्या देखा पर्छ। आज हामी तपाईंलाई खाने-पिउने यस्ता केहि चीजहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौं जुन सँगै खानु हुँदैन। जस्तो कि, तपाईंले दहीसँग संग कहिल्यै पनि खट्टा फल खानु हुँदैन। यी चिजसँगै खादा पच्दैन जसको कारण पेट ग’डबड हुन्छ। यस दहीले चिसो हुन्छ, त्यसैले यसलाई तातो कुनै पनि चीजको साथ खान हुँदैन।
Prevधेरै चिया पिउनुहुन्छ ? तपाईंका लागि खुसीको खबर छ…
Nextमान्छेलाई छुनेबित्तिकै कोरोना सर्दैन ! कसरि सर्छ त ?